Filohan’ny Antenimierampirenena: “Tapitra ny fotoana famindrampo ho an’ny mpitondra” | NewsMada
“Raha ny hita sy heno tato ho ato, ahatsapana fa manomboka amin’izay ireo fivoriana ara-politika etsy sy eroa, ny fanehoan-kevitra politika, ny tsikera mihitsy aza. Midika izany fa tapitra amin’izay ny fotoana famindrampo ho an’ny mpitondra.”
Io ny kabarin’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, tamin’ny famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana teny Tsimbazaza, omaly.
Tsy misy tokony hahagaga izany fanehoan-kevitra politika izany fa fomba mahazatra eo amin’ny fanaovana politika.
Manambara izany fa tokony hiasa mafy ny mpanatanteraka hanatontosa ny fandaharanasa fampandrosoana nampanantenaina ny vahoaka, araka ny vinan’ny filohan’ny Repoblika.
Mba tsy ho taitaitra ny vahoaka
Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina intsony koa ny maro anisa eny anivon’ny parlemanta amin’ny fanomezana soso-kevitra sy tohana mahomby ho an’ny mpanatanteraka fa izany ny fifandanjan-kery hateraky ny demokrasia, araka ny nambarany.
Tsy maintsy hivadibadika eny hatrany ny hevitra tsy mitovy. Saingy, katsahina ny fitoniana, na ara-piarahamonina na ara-politika, ahazoan’ny olona sy ny tomponandraikitra miasa araka ny tokony ho izy.
Mba tsy ho taitra ambony ihany na hiahiahy koa ny vahoaka hoe manomboka indray ny adilahy politika. Manao ny asany ny mpanao politika. Manana ny anjara tandrify azy amin’ny fanoherana ny mpanohitra ka mankamin’izany avokoa ny fanehoan-keviny. Ny mpitondra sy mpanohana azy, miezaka miaro ny asa atao sy mitady lalana hirosoana hatrany.
Nambarany fa voadinika antsakany sy andavany ny tolo-dalàna momba ny satan’ny fanoherana sy ny satan’ny mpanohitra. Tsy nisy sakana ny depiote nitondra fanitsiana. Mitohy tsikelikely ny famerenana ny hasin’ny Antenimierampirenena amin’ny fanavaozana ny fitsipika anatiny.